PAPA RAY MASINA : Mpino katolika efa ho 5 300 no hanainga eto Mahajanga ny 05 septambra izao
Hentitra ny antokondraharaha misahana ny fitaterana an-tanety na ny Att eto Mahajanga, ka nisy ny lamin’asa vaovao hoentina handrindrana ny fifamoivoizana manomboka eto am-piaingana ka hatraminy fiverenana. 16 août 2019
Fantatra fa fiara mahazaka mpandeha miisa valo ambin’ny folo, mahatratra hatraminy telon-jato isa no ilaina amin’ireo mpandeha hatraminy 5 300 ireo amin’izao fitsenana an’i Papa iray masina any Antananarivo io. Noho ny tsy fahampian’ny fiara mitrandraka ny zotra nasionaly mampitohy an’i Mahajanga sy Antananarivo, dia nomen’ny Att fahazoan-dalana manokana ireo fiara avy aminy zotra rezionaly sy ny zotra Urbain, hitondra ny mpino katolika hitsena an’i Papa. Efa manao tohivakana hatramin’iny herinandro lasa teo iny tonga teny aminy Att ireo tompon’ny fiara izay manana faniriana ny hitatitra ireo olona hikasa handeha hamonjy ity fitsenana an’i Papa eto Madagasikara ity.
Niantso ireo olona manana ny fiara manokana i Toky Rahaingo Rafanomezantiana, talen’ny Att eto Mahajanga mba hifameno toerana ao anaty ny fiara iray araka ny fahazoan-dalana voarakitra ao aminy karatra miloko volombatolalaka. Izany no atao mba hampihenana ny isan’ny fiara hifamezivezy ka hialana amin’ny fitohanan’ny fiara any an-drenivohitra sy hampihenana ihany koa ny fitanjozoron’ireo fiara eny amin’iny lalam-pirenena faha efatra iny amin’ny fotoam-piaingana ary hikajiana ny fandaniana solika ho an’ireny fiara ireny.
Efa nisy ny baiko nataon’ny talen’ny Att sy ny minisiteran’ny fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro, tarihin’i Ramamonjisoa Heriniana Angelo, tamin’ireo kaoperativa ao amin’ny tobim-piantsonana anatiny sy ny tsy miankina, mba samy hifarimbona hitatitra ireo mpizaika hamonjy ny fahatongavan’i Papa ray masin’i Katolika ny faha 06 septambra izao io. Tsy maintsy manana fanamarinana ny fitsarana ny fiara teny amin’ny sampandraharaha misahana ny fitsirihana ara-mekanika eny Amborovy ny tompon’ilay fiara, vao afaka mahazo ny fahazoan-dalana manokana na ny "autorisation spéciale" hitatitra ireo mpandeha hamonjy ity fivahinianana masina ataon’i Papa François any Antananarivo, hoy hatrany ny talen’ny Att eto an-toerana.
Nanentana ny mpamily ity farany mba samy hikajy ny hafainganam-pandeha antonony eny an-dalana eny, hisorohana ny lozam-pifamoivoizana, satria lahy tokana ny aina ka mila malina hatrany. Ho an’ireo fiara manao zotra rezionaly sy ny Urbain, izay manam-paniriana hitatitra ireo mpino hihazo any ambonivohitra dia tsy maintsy mpamily efa za-dalana eny amin’iny lalam-pirenena fahaefatra sy efa nanao ny fitaterana nihazo tany Antananarivo na mihoatra vao mahazo io fahazoan-dalana manokana io, hoy hatrany i Toky Rahaingo, talen’ ny Att. Ny" Att, dia miasa sy mirary soa ho anao", no fanambin’izy ireo.